ယခုသတငျးအတှကျ မှတျခကျြအားလုံးကို ဖတျရှုနျ ပေါ့ဒျကတျဈ (Podcasts)
Radio ချစ်သူ နရေပျ- Yangon :
iPhone podcasts နဲ့ ယူရငျ ထုတျလှငျ့ခြိနျ ၅ ခုလုံးကိုတဈခါထဲယူသလိုဖွဈနပေါတယျ။ ထုတျလှငျ့ခြိနျတဈခုထဲကိုဘဲရှေးယူလို့ရမလား? ခငျဗြာ။ ဥပမာ BBC,VOA တို့လိုပေါ့ဗြာ။
RFA ရဲ့ သတငျးတှေ၊အစီအစဉျတှေ အားလုံးအတှကျကြေးဇူးတငျပါတယျ။
Mar 24, 2018 12:48 AM
phyo lwin နရေပျ- TAZE :
ကြှနျတျောအသကျ ၁၄ နှဈလောကျကနနေားထောငျနမေိတာ ယနထေိ့နှဈသကျစှာနားသောတဆကျနဆေဲပါဗြာ။
Jan 24, 2017 07:01 AM
အောင်မြင့်ထွန်း နရေပျ- အမှတ် ၄ ၊ ပခုက္ကူ မြို့ :
အရငျက rfa radio ကို burmese radio application နဲ့ နားထောငျနတောပါ အဲဒီမှာ ထုတျလှတျပွီးတာနဲ့ နားထောငျလို့ရပါတယျ
ဥပမာ မနကျ ၇ နာရီသတငျးနားထောငျမယျဆိုရငျ ၇ နာရီပွီးတာနဲ့ နားထောငျလို့ရပါတယျ အခုမရဘူး ဖွဈနလေို့ပါ
Oct 11, 2015 09:19 PM
အမည်မဖော်လိုသူ နရေပျ- နေရပ်မဖော်လိုပါ :
မောင်လွင် နရေပျ- ၇န်ကုန် :
RFA ကို နားဆငျ၇တာကွိုကျ ပါတယျ အားပေးပါတယျ..အဆငျပွပေါတယျ..ကြေးဇူးတငျပါတယျ..
Mar 13, 2015 06:08 AM
Sometimes, can you ask Mrs Aris (a) Aung San Suu Kyiacross question like RFA did so many times on government officials?
Do you afraid to ask?
Oct 20, 2014 10:33 PM
the webpage for rfa is quite complex and confusing for myanmar page. i don't even know how to listen to the morning or evening news. in the BBC burmese, it's just click away and i can always listen to any news i missed.
ကြှနျတေျာ့ရဲ့ ipod ထဲကိုဘယျလိုထညျ့ရမလဲဆိုတာညှနျကွားပေးပါခငျဗြား
Sep 28, 2012 02:38 AM
han maung နရေပျ- အင်းစိန် :
Sep 27, 2012 11:13 AM
May 08, 2012 09:13 AM
Feb 29, 2012 09:37 AM
Dec 27, 2011 11:59 PM
Nov 24, 2011 10:19 AM
ဒလ လ.၀.က ရုံအကြောင်းပါ....မောင်နှမ ၃ ယောက်မှတ်ပုံတင်လုပ်တာ အမေ ရဲ့ နိုင် ပုံစံ တော့အပြည့်ဆုံရှိပါတယ်။ အဖေ က သွေးနှော် ဖြစ်နေလို့
နိုင်ပုံစံ မတင်ပြနိုင်ပါဘူး နိုင် ကဒ် မရဘူးတဲ့ သုံးခေါက်ချိုးရမယ်လို့ပြောပါတယ်။တင်ထားတာ ၃ လပြည်တော့မယ် စာရွက်စာတမ်းတွေတိုင်းရုံတင်ဘို့တစ်ရောက် ၁၀၀၀၀ စီပေးရမယ်လို့ပြောပါတယ်။တစ်ယောက် ၁၀၀၀၀ စီပေးမှ တိုင်းရုံတင်လို့ရမယ်ပြောပါတယ်။ဒီသတင်းကို အများသိစေရန် RFA သို့ပေးပို့ချင်းဖြစ်ပါတယ်။
Oct 28, 2011 09:44 AM
Jun 01, 2011 01:59 AM
RFA is one of the best broadcasting stations for Burmese.
Apr 15, 2011 06:39 AM
Mar 28, 2011 02:03 PM
Sep 26, 2010 05:12 PM
I like RFA !
Aug 17, 2010 04:59 AM
CAN NOT DOWNLOAD TO IPHONE BY SAFARI. PLS GIVE ME ADVICE
Jun 06, 2010 04:34 PM